Fitantanam-pitondrana · Oktobra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Oktobra, 2012
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Oktobra, 2012
Afrika Mainty 29 Oktobra 2012
Koety: Fihetsiketsehana Goavana Indrindra Ao Amin'ny Firenena?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 25 Oktobra 2012
Nampiasaina ny baomba mandatsa-dranomaso sy ny grenady mba hanaparitahana ny fihetsiketsehana manohitra ny fanovana ny lalàm-pifidianana ao Koety. Nalefa tao amin'ny Twitter ny antso ho amin'ny diabe Karamat Watan (Fahamendreham-pirenena), izay natao tamin'ny Alahady, ary nahasarika olona teo amin'ny 150,000 teo tamin'ireo mponina 3 tapitrasa ao amin'ny firenena. Nanambara ny...
Azia Atsimo 23 Oktobra 2012
Firenena mivelona amin'ny fambolena i Bangladesh. Marobe ireo mponina no miankina amin'ny fambolena ny fivelomany. Ankehitriny, 19.1%-n'ny PIB (Vokatra Ankapobe Anatiny) dia avy amin'ity sehatra ity . Navoakan'ny fanadihadiana farany teo [bn] fa miha-mijotso ny fiankinan-doha amin'ny fambolena sy ny voka-pambolena ao amin'ny firenena. Nihena ihany koa ny fampiasana olona eo amin'ny...
Azia Atsinanana 23 Oktobra 2012
Torkia: Fahanginana Manoloana Ny Fitokonana Tsy Hihinan-kanina Ataon'ireo Gadra Politika Kiorda
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 22 Oktobra 2012
Niditra tamin'ny fitokonana tsy hihinan-kanina intsony ireo gadra politika Kiorda an-jatony ao Torkia. Tsy mba notaterin'ny fampahalalam-baovao iraisam-pirenena sy ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona izany hetsika tsy misy herisetra izany. Nilaza ny mpikatroka iray, izay nitantara mikasika ity hetsika ity fa ireto manaraka ireto no takian'ireo mpitokona tsy hihinan-kanina: @hevallo: Ny fanafahana ny lehiben'ny...